Tanambao-Andranolava: Fiara sprinter iray nivadika, vehivavy 1 maty tsy tsa-drano, olona 5 hafa naratra mafy
vendredi, 14 septembre 2018 19:22
Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina 1 km miala an'i Tanambao Andranolava ny asaboty lasa teo, tokony ho tamin'ny fito ora hariva. Fiara Sprinter mitrandraka ny zotra nasionaly avy any Antananarivo ho aty Mahajanga no nivadika.
Raha ny fanazavan'ny mpamily, izay velona soamantsara dia tafalatsaka tamin'ny sisin'arabe ny kodiarana afara ankavanana ka izy hanarina ny fiara iny no vaky ilay kodiarana nilatsaka. Tsy voafehy intsony ny familiana ka niodina nitodika toy ny hiverina ho any Antananarivo indray ny lohan'ny fiara, ary nivadika avy eo. Maty tsy tsa-drano ny vehivavy iray nipetraka teo amin'ny “devant” raha efa niala tany Andranofasika ny olona niara-nipetraka taminy. Mpandeha 5 hafa no naratra mafy.
Nahalany fanahy ny zava-nitranga io alina io, nanjavona avokoa ny entan'ny mpandeha tao anatin'ity fiara tra-doza ity. Olom-bitsy no namonjy sy nanarina ny fiara, fa ny ankamaroan'ny mpitazana nitaona izay azo nalaina rehetra. Ela vao tonga ny Zandary satria tsy nisy nampandre.
“Manifold” an'ny kaoperativa hafa no nampiasain'ity fiara ity fa tany amin'ny tapakilan'ireo mpandeha no nahitana ny tena kaoperativa iasany. Nantsoina ny tompon'andraikitry ny kaoperativa ary azo antso soamantsara, nilaza fa tsy manana ny mombamomba ireo mpandeha tao amin'ilay fiara.
Ny mahagaga, nandritra ireny vanim-potoana nisian'ny pesta ireny, hentitra ireo tampon'andraikitra amin'ny famenoana ny lisitry ny mpandeha sy ny olona antsoina : raha sendra loza mialohan'ny fiaingana.